Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka JOKA oo shirkoodii 1aad isugu yimid oo bogaadin u diray ..
Maamulka JOKA oo shirkoodii 1aad isugu yimid oo bogaadin u diray ..
Posted by ONA Admin	/ April 11, 2014
Maamulka jaaliyadda Ogaadeeniya Ee Koonfur Afrika ayaa shir isugu yinid magaalada pretoria ee xarunta Wadanka Koonfur Afrika . Shirkan oo ahaa shirkii ugu horeeyay ee maamulka JOKA ee dhawaan laga doortay shirwaynhii 10 aad uu qabto shirkan ayaa ahaa shir ahmiyad wayn xanbaarsanaa.
Shirkan Oo uu daadihinayay Gudoomiyaha JOKA Mudane M Dahir ayaa furmay Abaarihii salaada duhur kadin isagoo socday ilaa sagaalka fiidnimo waxaana Shirka lagu lafa guray qorshe sanadeedkii jaaliyada isla markaana waxaa lagu dhisay maamul hoosaadkii JOKA. Waxaa kaloo Shirka lagu dajiyaya qaab shaqeedkii JOKA ee sanadkan soosocda In shaa allaah.
Ugu danbay tii shirkan ayaa waxaa kasoo baxay Go,aano wax ku ool ah oy ka mid tahay sidii kor loogu qaadi lahaa abaabulka bulshada. Isla markaana daaha looga qaadi lahaa beenta iyo dacaayada riqiiska ah ee maanta cadawgu ku adeeganayo.
BOGAADIN IYO DUCO:
Maamulka JOKA wuxuu bogaadin u dirayaa dhamaan xubnaha wadanka koofur Afrika Sidi geesinimada leh ee ay qadiyadooda u meel marinayaan.
Maamulka JOKA wuxuu saxaafada Ogadeniya Maqal, Muuqaal Iyo qoraalba u dirayaa mahad celin balaadhan.
Maamulka JOKA wuxuu gacmo furan ku soo dhawaynayaa dhamaanba Jaaliyaadka Ogaadeeniya ee Jira iyo wada shaqayn wacan sanadkan.
Maamulka JOKA wuxuu madah naq iyo bogaadi gaadhsiinayaa Shirwaynaha Jaaliyaadka Ogaadeeniya Ee Pacific Perth. Wuxuuna Alle uga baryayaa in idinku guuleeyo.
Maamulka JOKA wuxuu duco iyo alle bari u dirayaa dhamaan dadka ku xidhan dulmiga iyo xadgudubka ee ku jira jeelasha xaqdarada ah ee wadanka OGADENIA. Ugu horeeyo JEEL OGADEN. In uu alle cadawgaas ka siidaayo.
Maamulka JOKA wuxuu Hanbalyo iyo dhiirigalin u dirayaa Ciidamada qalabka sida ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya.
Midnimo. Mintid. Isku tashi allaahu akbar
Guul Iyo Gobanimo.